‘हिंसाका घटना बढ्यो’ - Pradesh Today ‘हिंसाका घटना बढ्यो’ - Pradesh Today
जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ ?
जिल्ला अहिले अपराधिक गतिविधिहरु केही भएपनि कमि आएको छ । कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले पनि विषेशगरी आवतजावत कम भएका कारण पनि अपराधिक गतिविधिहरु कम भएका थिए ।
अहिले लकडाउन खुलेपछि पनि त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरु त्यति धेरै हुन पाएका छैन् । हामीले विषेशगरी म आएपछि यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । हामी अहिले कोभिड–१९ सँगका गतिविधिमा पनि सँगै छौँ ।
प्रायः बढी कस्ता प्रकृतिका अपराधिक गतिविधि हुने गरेका छन् ?
पछिल्लो समय जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरु घटेका छन् । विभिन्न तवरले महिलामाथि हुने गरेका घटना बढी हुने गरेका छन् । घरेलु हिंसादेखि जबरजस्ती करणी जस्ता अपराधका घटना घट्ने गरेका छन् ।
प्रहरीमा जाहेरी परेका अधिकांश त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरिसकेका छौँ, फरार रहेकाहरुको पनि खोजी गरिरहेका छन् । नागरिकलाई प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिन्छ विश्वास टुट्न नपाओस् भनेर काम गरिरहेका छौँ ।
जिल्लामा कुन पालिकामा बढी अपराधिक गतिविधि हुने गरेको पाउनुभएको छ ?
अपराधिक गतिविधि विषेश त बढी जनघनत्व भएका ठाउँमा हुने गरेको छ । जिल्लामा यस्ता पालिका भनेको तुलसीपुर, घोराही, लमही लगायतका रहेका छन् । ति पालिकामा अलि बढी अपराधिक गतिविधि हुने गरेका छन् । ति पालिकामा प्रहरी बढी परिचालन हुन्छ नै । सकेसम्म जतिसक्दो छिटो अपराधिलाई पत्ता लगाइ पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ ।
लामो समय विचाराधिन रहेका मुद्दाहरु कति छन् ?
छन्, धेरै नि ! राजकुमार श्रेष्ठदेखि सञ्चार उद्यमी धिताल हत्याकाण्ड लामो समयदेखि अनुसन्धान मै छन् । ति मुद्दाहरुमा हामीले यसभन्दा जिल्ला प्रमुखले गरेका अनुसन्धानलाई अझ नजिक पुग्नका लागि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । पक्कै पनि उहाँहरु जो पीडित परिवार हुनुहुन्छ । न्याय पाउनुहुन्छ भनेर नै काम गरिरहेका छौँ ।
लागूऔषध मुद्दा कति छन् ?
लागूऔषध कारोबार मुद्दाका घटना बढेकै छन् । दाङलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर यस्ता गतिविधि हुने गरेको पाएका छौँ । विषेशगरी रोल्पा, रुकुम, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट दाङ हुँदै अन्य जिल्ला लैजाने गरेको पाइन्छ । हामीले सुक्ष्म ढंगबाट अनुसन्धान गरी सबै किसिमका कारोबारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरेका छौँ ।
यस्ता गतिविधिमा कस्ता व्यक्तिहरु बढी संलग्न भएका छन् ?
अब यस्ता किसिमका घटना महिला पुरुष दुबै संलग्न भएको पाएका छौँ । जो लागूऔषध सहजै पाइन्छ त्यस्तोको व्यापार चल्ने गरेको छ । मध्यम वर्गीय आय भएका परिवारका सदस्यलाई प्रयोग गरी ठूला–ठूला वर्गका मानिसले धन्दा गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कोरोना महामारीका बिचमा अपराध बढेका छन् या घटेका छन् ?
अहिले त घटेकै छन्, मैले पहिला पनि भने तपाईलाई अहिले पहिलेको तुलनामा अपराध घटेकै हुन् । अब अपराधमुक्त समाजको त परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । केही न केही अपराधका घटना त भइहाल्छ तर ठूल–ठूला अपराध अहिले जिल्लामा हुन पाएका छैनन् भन्ने सक्छु ।
अपराधमा संलग्न व्यक्ति छुटाउने भनेर दबाव कतिको आउँछ ?
आउँछ, स्वभाविक रुपमा, मैले तपाईलाई किन ढाट्ने हो र ! अब अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आफूले अपराध गरेको छैन् भने नेतालाई भनेपछि उहाँहरुले फोन गर्नुहुन्छ तर हामीले कसैको पनि प्रलोभनमा नपरेर काम गरिरहेका छौँ ।
अपराधमुक्त समाज निर्माणका लागि नागरिकको भूमिक के हुन सक्छ ?
धेरै छ नि । कुनै पनि अपराधिक गतिविधि हुन लागेको छ भने प्रहरीलाई तुरुन्तै जानकारी दिएर त्यसबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्छ । हामीले फेरि पनि भन्छौँ कुनै पनि घटना भएमा १००, १०३ र १०४ मा खबर गर्नुहोस्, प्रहरीलाई सहयोग गर्नुहोस् ।
गाउँपालिकाबाटै निर्माण इजाजत